ဘိုရွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Boron မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဘိုရွန် (Boron) သည် သတ္တုမဟုတ်သော ဓာတုဒြပ်စင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အလှည့်မှန်ဇယားတွင်အုပ်စု၃ရှိ သတ္တုယောင်(non-metal) တစ်မျိုးသာဖြစ်သည်။ ဘိုရွန်(Boron) ကို ၁၈၀၈-ခုနှစ်တွင် ဓာတုဗေဒပညာရှင်များဖြစ်သော ဆားဟူဖရီ ဒေးဗွီ(Sir Humphry Davy) နှင့် ဂေးလူးဇက်စ် (J.L Gay Lussac)ကိုစတင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သဘာဝတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုး အသွင်သွင်အမျိုးမျိုးနှင့်တွေ့ရပြီး အများအားဖြင့် amorphous Boron၊ အနက်အရောင်အမှုန့်(a dark powder) အသွင်နှင့် တွေ့ရသကဲ့သို့ အောက်စီဂျင်၊ရေ၊ အက်ဆစ်များနှင့် အယ်လ်ကာလီများနှင့် အလွယ်တကူဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းမရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ သို့သော် သတ္တု(metal)များနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဘိုးရိုဒ်စ်(borides) အသွင်သို့ ပြောင်းစေနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောစံအပူချိန်တွင် ဘိုရွန်(Boron) သည် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်းနည်း(poor electrical conductor)သည်။ သို့သော် အပူချိန်မြင့်လာသည် နှင့်အမျှ ဘိုရွန်(Boron)သည် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်းရည်အားကောင်းသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်စားသုံးနေသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် တခြားအာ ဟာရဓာတ်များနှင့်အတူ ဘိုရွန်(Boron)ဓာတ်တွဲပါနေသည်ကို လေ့လာသိရှိနိုင်သည်။ (အထူးသဖြင့်-ပန်းဂေါ်ဖီ တွင်ပါသည်) သဘာ၀ တွင်းထွက်ကျောက်များသည် စတည်ဖြစ်တည်ချိန်တွင်ဘိုရွန် ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပေါင်းစပ်ပါဝင်သွားသဖြင့် အရောင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ- စိန်ကျောက်မျက်ရတနာတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့်အခါ အဝါအရောင် အသွင် မြင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ ဘိုရွန်(Boron)ပေါင်းစပ်ပါဝင်ရင် အပြာအရောင်သမ်းသည့် အသွင်ကို တွေ့ရတတ်သည်။ ဘိုရွန်(Boron) ကို သဘာဝတွင်ဒြပ်စင်ပုံစင်အဖြစ် မတွေ့ရသော်လည်း ဘိုးရစ်(borax)၊ ဘိုးရစ်အက်ဆစ်(boric acid) ကာနိုက်(kernite)၊ ယူလီဇိုက်(ulexxite)၊ ကိုလီမန်နိုက် (colemanite) နှင့် ဘိုးရိတ်(borates) များနှင့် အတူ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရေပူစမ်းရှိရေများတွင် တခါတရံ ဘိုးရစ်အက်ဆစ်(Boric acids) များ ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘိုးရိတ်(borates)များကို US, Tibet, Chile နှင့် Turkey နိုင်ငံများရှိ သတ္တုတွင်းများမှ တစ်နှစ်လျှင် တန်နှစ်သန်းခန့် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
α-, β-rhombohedral, β-tetragonal (and Allotropes of boron)
ဘယ်ရီလီယမ် ← ဘိုရွန် → ကာဗွန်
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဘိုရွန်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
၃ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သက်ရောက်မှု
စီးပွားရေးအားဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အရေးပါသော ဘိုရွန်(Boron)ဒြပ်ပေါင်းမှာ ဆိုဒီယမ် တြာဘိုးရိတ် ဒီကာဟိုက်ဒရိုက်(sodium tetraborate decahydrate Na2B4O7 • 10H2O),(သို့မဟုတ်) ဘိုးရစ်( borax,) ဖြစ်သည်။၎င်းဒြပ်ပေါင်းကို ဖိုင်ဘာဖန်(fiberglass) လုပ်ငန်းနှင့် ဆိုဒီယမ် ပါဘိုးရိတ်(sodium perborate) အရောင်ချွတ်ရာတွင် အသုံးများသည်။ ဘိုးရစ်(boric acid) သည် ချည်မျှင်နှင့် အထည် ထုတ်ကုန်အများအတွက် အဓိက အရေးပါသော ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘိုရွန်(Boron) ဒြပ်ပေါင်းများကို ဩဂဲနစ်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ပြုခြင်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ဖန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို သီးသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ သစ်များ ကြာရှည်ခံအောင် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုများသည်ကို သိရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ခိုင်ခံ့ကြံ့ခိုင်မှု အားကောင်းပြီး အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော အစွမ်းသတ္တိရှိခြင်းကြောင့် လေယဉ်ကိုယ်ထည် တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အပံ့အဖြစ် ဘိုရွန် အမျှင်အချောင်း (boron filaments)များကို အသုံးပြုကြသည်။
ရှေးယခင်က ပါဘိုးရိတ်(perborate) လုပ်ရန် အသုံးပြုကြသော ဘိုးရစ်( borax) များကို ယ္ခုအခါတွင် အိမ်သုံး ဆပ်ပြာမှုန့်များတွင် အရောင်ချွတ်ပစ္စည်း( bleaching agent) အဖြစ် အသုံးတွင်ကျယ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် ဘိုရွန်ဒြပ်ပေါင်းများကို အစားအစာနှင့် သားငါးများ (အထူးသဖြင့်- ထောပတ်ဆီအခဲနှင့် ငါးများ) မပုပ်သိုးပဲကြာရှည်ခံအောင် ထားသိုရာတွင် လည်း အသုံးပြုကြသည်။
သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သောက်သုံးရေ၊ လေနှင့် စားသောက် ကုန်များမှတဆင့် ဘိုရွန်၏ ဘေးသင့်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ နေ့စဉ်ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဒာကိုယ် အတွင်း သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် ဘိုရွန်ပမာဏမှာ 2mg ခန့် မှ 18mg ခန့် အထိရှိသည်။ လူတစ်ယောက်သည် ဘိုရွန်(Boron)ပါသော အစားစာများကို ပမာဏများများစားမိပါက ၎င်း၏ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းတွင် ဘိုရွန်(Boron)ပါဝင်မှု အဆင့်မြင့်တက်လာပြီး ကျမ္မာရေးပြဿနာ ဆိုးကျိုး များဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ ဘိုရွန်(Boron)သည် အစာအိမ်၊အသည်း၊ ကျောက်ကပ် နှင့်ဦးနှောက်ကို ဖျက်ဆီးစေနိုင်သကဲ့သို့ သေဆုံးသည့် အခြေအနေအထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘိုရွန် (Boron) ပမာဏအနည်းငယ်ကို ရှူရှိုက်မိပါက နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းနှင့် မျက်စိများကို ဘေးသင့် ရောက်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်း ဘိုရစ်အက်ဆစ် ပမာဏ 5g နေရာယူပါက နေမကောင်းသည့် အခြေနေကို ဖြစ်ေစေနိုင်ပြီး ပမာဏ 20g မှပိုပြီး နေရာယူလာပါက အသက်ဆုံးရှုံးသည့် အခြေအနေအထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သားငါးများစားခြင်းဖြင့် ခန္ဒာကိုယ်အတွင်း ဘိုရွန်(Boron)ပမာဏကို မတိုးစေနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်- ဘိုရွန်(Boron)သည် သတ္တဝါ၏ တစ်သျှူးများတွင် စုဖွဲ့ စည်းနေခြင်း မရှိခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ဘိုရွန်(Boron)သည် အဓိက အားဖြင့် သဘာ၀ဖြစ်စဉ်များမှတဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသော ဒြပ်စင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုအလိုက် မြေဆီလွှာ၊ လေ၊ ရေ များမှတဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘိုရွန်(Boron)ကို သဘာသအားဖြင့်တွေ့ရသည်။ မြေအောက်ရေ တွင်လည်း ပမာဏ အနည်းမျှ ပါဝင်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ လူသားများကလည်း ဖန်ချက် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကျောက်မီးသွေးများ လောင်ကျွမ်းစေခြင်း၊ ကြေးအရည်ပျော်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးမြေများ အတွင်း ဓာတ်မြေဩဇာများပေါင်းထပ်ခြင်းစသည် အားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ဘိုရွန်(Boron) ပမာဏများ တိုးပွားအောင် ပြုလုပ်နေကြသည်။ လေနှင့်သောက်သုံးရေမှ ရရှိသော ဘိုရွန်(Boron)၏ဘေးဖြစ်စေမှုမှာ မရှိသလောက် နည်းသော်လည်း အလုပ်ခွင်များတွင် ရှိသော ဖုန်သရိုက်များမှ တဆင့်ရရှိသော ဘိုးရတ်များ၏ ဘေးသင့်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အလှကုန်ပစ္စည်းနှင့် ရေချိုးခန်းသုံးနှင့် အကာကွယ်ပစ္စည်းများမှ တဆင့်လည်း ဘိုရွန်(Boron)၏ ဘေးသင့်ရောက်မှုများ ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အပင်များက ဘိုရွန်(Boron)ကို မြေကြီးမှတဆင့်ရရှိကြပြီး ထိုအပင်များကို စားသုံး မိသောသတ္တဝါများမှ တဆင့် နောက်ဆုံး အစာဆက်တမ်း(food chain) စနစ်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဘိုရွန်(Boron)သည် သတ္တဝါများ၏ တစ်သျှူးတွင် တွေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် အနည်းငယ်မျှ စုဖွဲ့ မနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သတ္တဝါများသည် သောက်သုံးရေနှင့် အစားအစာများမှတဆင့် အချိန်နှင့်အမျှ ဘိုရွန်(Boron)ပမာဏ များပြား လာပါက လာပါက ဖိုဆိုင်ရာမျိုးပွားအင်္ဂါကို ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ သတ္တဝါများသည် ဘိုရွန် (Boron) ၏ ဘေးသက်ရောက်မှုဆိုးကျိုးများဖြစ်နေပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ၎င်း၏ သန္ဒေသားကိုပါ ဘေးသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်စီးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်မပျက်စီးပဲ မွေးဖွားလာပါကလည်း ကိုယ်အင်္ဂါ ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် ကိုယ်ခန္ဒာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပေသည်။
↑ "Infrared Emission Spectroscopy of BF and AIF" (1995). J. Molecular Spectroscopy 170. doi:10.1006/jmsp.1995.1058. Bibcode: 1995JMoSp.170...82Z.
↑ Melanie Schroeder။ "Eigenschaften von borreichen Boriden und Scandium-Aluminium-Oxid-Carbiden" (in de)၊ စာ- 139။
↑ "Physical-Chemical Properties of beta-Rhombohedral Boron" (October 1973). High Temp. Sci.5(5): 349–57.
↑ Lide, David R. (ed.) (2000)။ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF)။ CRC press။ ISBN 0849304814။ CS1 maint: extra text: authors list (link)
↑ "Sur la décomposition et la recomposition de l'acide boracique" (1808). Annales de chimie 68: 169–174.
↑ Davy H (1809). "An account of some new analytical researches on the nature of certain bodies, particularly the alkalies, phosphorus, sulphur, carbonaceous matter, and the acids hitherto undecomposed: with some general observations on chemical theory". Philosophical Transactions of the Royal Society of London 99: 39–104. doi:10.1098/rstl.1809.0005.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements။ National Institute of Standards and Technology။ 2008-09-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Szegedi, S. (1990). "Determination of boron in glass by neutron transmission method". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Letters 146 (3): 177. doi:10.1007/BF02165219.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိုရွန်&oldid=722747" မှ ရယူရန်
၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။